FITORIANA MPANDRAHARAHA AO FIANARANTSOA: “Manao harcèlement de procédure ny mpitory” - ewa.mg
News - FITORIANA MPANDRAHARAHA AO FIANARANTSOA: “Manao harcèlement de procédure ny mpitory”
Nanazava ny raharaha momba ilay mpandraharaha avy ao Fianarantsoa voatonona tamin’ny haino vaky jery ny mpisolovava miaro azy, Maître Herinavolana ny 15 oktobra 2020. “Ny olona arovako dia maka entana amina olona iray aty Antananarivo. Io fournisseur io nanana distributeur tany Fianarantsoa ka tao io mpandraharaha io no naka entam-barotra. Nilaza anefa io fournisseur io taty aoriana fa taloha izy no niara-niasa tamin’io distributeur io fa tsy ao intsony amin’izao. Izahay tsy nampahafantarina izany fa isaky ny maka entana dia mandoa vola”, hoy i Maître Herinavolana.
Notorian’io fournisseur io teo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianarantsoa io mpandraharaha io satria hoe hananany trosa. “Manana porofo izahay fa tsy hananany zareo vola intsony, tsy mitombona ilay trosa”, hoy i Maître Herinavolana. Resaka ady heloka no nitoriana ilay mpandraharaha. “Rehefa nivoaka ny didy dia nanatsahatra ny fanenjehana ny olona arovako. Teo anelanelan’izay tsy afa-po tamin’ny didy ny mpitory ka nanao fampakarana. Zavatra mahagaga dia ny vola notadiaviny tamin’io, 1 milliard 260 millions Ariary ihany no nentiny nakàna ordonnance de saisi arrêt sy saisi consevatoire teto anivon’ny fitsarana Antananarivo. Eo no mahagaga anay, rehefa mitondra ny raharaha eny amin’ny ady heloka dia tsy tokony hitondra ny raharaha any amin’ny ady madio. Manao harcèlement de procédure izany. Raharaha anankiray, vola anankiray no takiana ka rehefa tsy afa-po amin’ny didy any Fianarantsoa dia mankaty Antananarivo dia ho aiza indray rehefa avy eo? Any amin’ny faritra izay misy fitsarana ve fa tsy misy paikady mazava efa voafaritry ny fehezan-dalàna ?”.
Cet article FITORIANA MPANDRAHARAHA AO FIANARANTSOA: “Manao harcèlement de procédure ny mpitory” est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article FITORIANA MPANDRAHARAHA AO FIANARANTSOA: “Manao harcèlement de procédure ny mpitory” a été récupéré chez Délire Madagascar.
Faritra Analamanga: nampahafantatra ny fisitrahana rano ny OSCEAH
Nisy ny atrikasa nandritra ny roa andro tetsy Antanimena, momba ny fahaiza-mandresy lahatra ny vondron’ny fiarahamonim-pirenena eo amin’ny rano sy ny fahadiovana eto Analamanga (OSCEAH), tarihin’ny filohany, Ranaivoson José.Nanatrika izany ireo solontenan’ny fikambanam-behivavy sy ireo sokajin’olona marefo toy ireo manana fahasembanana avy eto amin’ny faritra Analamanga.Nampahafantarina azy ireo ny fanaovana sisi-kevitra hahazoana vokatra haingana eo amin’ny fisitrahana rano sy fahadiovana. Eo koa ny fampahafantarana azy ireo ny zo amin’izany rano sy fidiovana izany.Nahafahana nihaino ny hetahetan’ny olona eny ifotony sy hitadiavana vahaolana ny atrikasa. Tamin’izany no nahafantarana fa sarotra ny fahazoana rano madio amin’ny faritra avo eto Antananarivo.Voafetra kosa ny fahazoana rano madio fisotro eny amin’ny faritra iva kanefa anisan’ny toerana be olona sy tena mila ny rano madio sy fidiovana eny. Mbola maro kosa ireo toerana tsy manana toeram-pidiovana sy fotodrafitrasa ho amin’ny fahadiovana.Tetsy andaniny, nilaza ny filoha nasionalin’ny OSCEAH, Raveloson Arsène, fa mbola ambany ny fahazoana rano madio fisotro, indrindra ny any atsimon’ny Nosy. Sahirana ny olona ary miaina tanteraka anaty tsy fahampian-drano.Tatiana AL’article Faritra Analamanga: nampahafantatra ny fisitrahana rano ny OSCEAH a été récupéré chez Newsmada.
Tsy afa-bela ny haino vaky jery: potiky ny fandikan-teny ny hasin’ny teny malagasy
Mbola mitohy ihany hatramin’izao ny fanaovana dikanteny mifototra amin’ny fisainam-bahiny. Toa vao mainka aza miroborobo fatratra izy io tato ho ato. Tsy afa-bela amin’ny fanaovana izany ny haino vaky jery. Taiza no mbola nisy izany “nosy mirahavavy” izany? Fa iza no niteraka an’ireo no ambara fa mpirahavavy ireo Nosy na tanàna ireo? Rehefa niha nihena ny fampiasana ny “latabatra boribory” sy ny “varavarana misokatra”, raikitra indray ny “… rahavavy” na ny “… mpirahavavy”.Raha izao no mitohy, ho potik’ity fandikan-teny tandrametaka ity ny hasin’ny teny malagasy. Omeo sehatra malalaka ny mpandala ny teny malagasy sy ny mpikaroka hanitsy ny tahaka ireny. Omeo fanampim-pahalalana ireo misehatra amin’ny haino vaky jery mba hialany tsikelikely ao anatina fandikan-teny misavoan-danitra tahaka ireny.Sao mba ilaina aza ny fametrahana karazana sampandraharaha iray isan-tsehatra hisahana ny fandikan-teny eto Madagasikara. Tsy azera fotsiny amin’ny Akademisianina na amin’ny mpampianatra na amin’ny mpampianatra irery intsony ny tsiny raha misy tsy fahaizana sy tsy fahafehezana ary ny fanaovana kitoatoa sy petatoko amin’ny teny malagasy. Vahaolana iray ihany koa ny famohazana ny voambolana taloha izay somary hadino ny fampiasana azy.… Sady tsy voatery hanao fandikan-teny isaky ny maheno “teny vazaha” ange e!HaRy RazafindrakotoL’article Tsy afa-bela ny haino vaky jery: potiky ny fandikan-teny ny hasin’ny teny malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Mendrika sy miavaka ho an’ny firenena…
Efa nampoizina amin’izao fitondrana izao? Mendrika sy niavaka ny fankalazana ny andron’ny 26 jona. Nanome fahamendrehana sy fiavahana tamin’ny matso lehibe teny amin’ny kianjan’i Mahamasina, ohatra, ny vahiny nasaina manokana, ny filohan’i Rwanda, i Paul Kagame, fitaratra amin’ny fitantanana, fampihavanam-pirenena…Teo koa ny famoahana fanamiana sy fitaovana vaovaon’ny Foloalindahy: fiaramanidina, helikoptera, fiara 4 x 4, fiadiana… Niara-dalana tamin’ izany ny famindra haingana kokoa. Nisy ny fampisehoana fidinan’ny miaramila tamin’ny elonaina, ny fampisehoana hakingana isan-karazany: haiady, fiadiana amin’ny asan-dahalo…Tamin’izany, niova, ohatra, ny arofenitra tamin’ny nisafoan’ny filohan’ny Repoblika sady filoha faratampon’ny Foloalindahy ireo nanao matso. Ankoatra ireo, teo ny hetsika teo aloha naverina toy ny kermesy nokarakarain’ny miaramila, ny alim-pandihizana, ny “podiums”… Niombonana sy nampiombona avokoa ireny rehetra ireny?Inona na ahoana koa ny manaraka? Vita iny fankalazana, tsy nitsanga-menatra ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy, ny fanjakana malagasy… Miatrika ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka indray izao! Mitondra inona eo amin’ny tsirairay iny fankalazana ny faha-59 taon’ny niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena iny?Mba hisy amin’izay ny fiovana amin’ny fiaraha-mijery ny soa iombonana ho an’ny rehetra amin’ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay, ny fijerena lavitra ho amin’ny taranaka any aoriana amin’izay atao ankehitriny… Mbola lavitra sy be no atrehina, fa fisentoana na fihatahana ahazoana maka vahana ny fetim-pirenena teo.Toy ny tsy nahazoana mora ny hoe Fahaleovantena niadiana fo no mbola iadiana amin’ny tena fahaleovantena ara-toekarena sy ara-politika, ohatra. Mba tena ho mendrika izany tokoa i Madagasikara sy ny Malagasy? Miavaka fa tsy mpanaraka ambokony ny hafa, tsy mpiankin-doha, tsy manaiky fitsabatsabahana… Kibo mitsara tena?Rafaly Nd.L’article Mendrika sy miavaka ho an’ny firenena… a été récupéré chez Newsmada.
Ravelonarivo Jean: «Miandry ny HCC isika”
Nanambara ny Jly Ravelonarivo Jean, anisan’ny kandidà filoham-pirenena teo, omaly fa mitodika any amin’ny HCC ny maro. “Any aminareo ry HCC ny zavatra rehetra. Matoky anareo ny vahoaka, matoky anareo ny tenanay. Raiamandreny ianareo ka hitsinjo tanteraka ny tombotsoan’ny vahoaka malagasy fa tsy an’olom-bitsy”, hoy izy. Nilaza ny tenany fa maro ny tsy fahatomombanana tamin’iny fifidianana iny, ary manana porofo izy ireo. “Tsy mba nametraka fitoriana teny amin’ny HCC anefa izahay ho fanajana ny soatoavina malagasy. Fitiavan-tanindrazana ny anay ka aleo mandefitra manana ny rariny”, hoy izy. Nambarany fa tonga ny fotoana anehoana ny fitiavan-tanindrazana. “Miaramila aho ary ambony aminay ny fitiavan-tanindrazana”, hoy ny Jly Ravelonarivo. Yves S. L’article Ravelonarivo Jean: «Miandry ny HCC isika” a été récupéré chez Newsmada.
FISOROHANA HAIN-TRANO :: Foanana ny fanorenana tranohazo eny Anosibe Andrefana
Nandray fepetra ny lehiben’ ny fokontany tao Anosibe Andrefana taorian’ny nisian’ ny hain-trano, ny 7 novambra lasa teo. Mandrara ny hanorenan’ny mponina trano- hazo izy ireo ho fisorohana ny loza. “Iharan’ny hain-trano foana ety amin’ity faritra Anosibe Andrefana ity. Efa intelo izao no nisy trano may tety hatramin’ ny naha lehiben’ny fokontany ahy. Tsy ekeko intsony fanorenana tranohazo fa na dia izao faha- voazana izao aza ve dia haha- finaritra”, hoy Randriniaina Teloson, lehiben’ny fokontany ao Anosibe Andrefana. Misy ny fanaraha-maso ataon’ ny eo anivon’ny fokontany mahakasika ity fanorenana ity. Anisan’ny fepetra noraisin’ izy ireo ny fiaraha-miasa amin’ ny mpitandro filaminana sy ny distrika ary ny kaominina ho an’ireo minia manao ny fanorenana tranohazo.“Hisy ny fidinana ifotony ataon’ ireo ambaratonga rehetra ka hiroso amin’ny fandrodanana avy hatrany izy ireo raha mahatratra fanorenana trano hazo ihany”, raha ny fanazavany hatrany. Betsaka ny fanorenana tsy ara-dalàna ety. Lalana kely no manelanelana ireo trano ireo, ka izany indrindra no mampihanaka ny afo haingana rehefa misy ny hain-trano. Raha tsiahivina dia tokantrano an-jatony no may teny amin’io faritra io. Ny dimampolo mahery amin’ireo dia mbola mipetraka anaty tranolay amin’izao fotoana izao. Sahirana ireto tokantrano ireto amin’izao na amin’ny lafiny sakafo izany na fonenana. Ho fanampiana ireto tokantrano ireto izay misy fianakaviana arivo dia nanolotra fanampiana azy ireo ny “Fondation Telma”, ny sabotsy lasa teo. “Efa maro ihany ireo fikambanana nanome fanampiana azy ireo saingy tsy ampy izany. Izany indrindra no nanosika anay sy ny sehatra tsy miankina hanome vary, siramamy sy menaka ary sakafo isan-karazany isaky ny fianakaviana”, hoy indray i Bordes Lova Hasinirina, talen’ny seraseran’ ny Axian. Miantso fiaraha-miasa amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) ity fikambanana ity mikasika ny tetikasa fanorenana trano biriky ho an’ny mponina Anosibe ho fisorohana ny hain-trano. L’article FISOROHANA HAIN-TRANO :: Foanana ny fanorenana tranohazo eny Anosibe Andrefana est apparu en premier sur AoRaha.
Teatra : Nandalo teto ny « Poupée barbue »
Tantara an-tsehatra nahazo fandresena tamin’ny « Loka teatra an’ny RFI » 2017, nandalo teto amintsika ny « Poupée barbue », izay sangan’asan’ilay mpanoratra kameroney Edouard Elvis Bvouma ary nolalaovina etsy amin’ny Institut Français de Madagascar, na ny IFM Analakely omaly alina. Ny ivon-toeram-pamokarana « Centre Dramatique National de Normandie-Rouen » no nitondra ny vokatra, ary ao anatin’ny fitetezana firenena maro izy ireo amin’izao fotoana. Fandrindrana an-tsehatra an’i Lorraine de Sagazan niaraka tamin’i Juliette Speck. Ity farany no ho mpilalao fototra amin’ny tantara. Ny « La poupée barbue » dia tohin’ilay tantara nosoratan’io mpanoratra io ihany, mitondra ny lohateny hoe « A la guerre comme à la Gamleboy », izay nahitana ilay kapôraly Boy Killer. Ny tantara dia mampiseho ny fihaonana tamin’ny tovovavy tsy manan-tsiny teo amin’ny sahan’ady, izay efa foana taorian’ny ady. Amin’ity tantara ity dia io tovovavy io indray no mitantara ny fitsoahana, ny fanolanana, ny fankahalana, ny ady ary ny fitsirian’ny fitiavany an’i Boy killer. Tantara nisy fizarana dimy. « Ny La Poupée Barbue dia isan’ireo tantara tena nanaitra ahy tamin’ireo 13 naroso ho an’ny lokan’ny RFI. Nisy ny fanovana tsy maintsy natao tamin’ny fomba fanoratry ny mpanoratra, izay mety nanohina ny mpihaino nefa nanotrona teo ny mpanoratra Edouard Elvis Bvouma », araka ny fanamarihan’i Lorraine de sagazan, nanao ny fandrindrana an-tsehatra. « Niara-niasa tamin’ny Centre Dramatique National de Normandie-Rouen , ary dodona tamin’ny fikarohana toerana, faritra hametrahana ny tantara, mba hanehoana ny tantaran’ilay tovovavy kely miaramila », hoy ihany izy. Miarantsoa L’article Teatra : Nandalo teto ny « Poupée barbue » est apparu en premier sur .L’article Teatra : Nandalo teto ny « Poupée barbue » a été récupéré chez Triatra.